प्रदेश सरकारको दोहोरियो प्रतिबद्धता, तटबन्धको लागि आएन बजेट - Kheladi News Kheladi News
पोखरा-छेवैमा खोला छन् । दुई खोलाको कटान वर्षेनी छ । खोलाकै दोभानमा रहेको मैदानमा फिफाको ड्रिम प्रोजेक्ट छ । कटान रोक्न तटठबन्धको लागि ठुलै बजेट चाहिन्छ । बजेट अहिलेसम्म सरकारले छुट्टाउन सकेको छैन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले पटकपटक तटबन्धको लागि प्रतिबद्धता जनाएपछि रकम निकासा नहुदाँ ड्रिम प्रोजेक्टले सार्थकता पाउन सकस भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि कास्कीको माछापुच्छ्रे गाँउपालिकाको भेडाबारीस्थित निर्माण गरिने भनिएको एन्फा टेक्निकल सेन्टरको अवलोकन गरेका थिए । अवलोकनकै क्रममा तटबन्धको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रकम निकासा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । पृथ्वीसुब्बाको सरकार हटेपछि नयाँ बनेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले पनि उस्तै प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सेन्टरको अवलोकन गर्दै तटबन्धको लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै फर्किए ।
सरकार प्रमुखले पटक पटक आश्वासन दिदैं फर्किए । आवश्वासन आशामा परिणत हुनै सकेको छैन् । प्रतिबद्धता गरेअनुसार आर्थिक सहयोग नहुदाँ एन्फा टेक्निकल सेन्टर निर्माणको अपेक्ष ागर्न नसकिने फुटबलप्रेमीले बताउँदै आएका छन् । फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको ड्रिम प्रोजेक्टले नेपाली फुटबलमा नयाँ आयाम थप्ने मात्रै नभई खेल पर्यटनलाई बलियो बनाउने विश्वास धेरैले लिएका छन् ।
फिफाको लगानी गर्ने भएपछि फिफाले लगानी सुरक्षित खोज्ने छ । त्यसको लागि पनि तटबन्ध अनिवार्य रहेको छ । ‘सेन्टरको प्रारम्भिक पूर्वाधारका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्ने प्रतिबद्ध छ ।’ अवलोकनपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने—‘ प्रदेश समृद्धिको मुल आधार पर्यटन भएको र पर्यटन भित्र खेलकुद जोडिएको छ, जोडन सकिन्छ ।’
पोखराबाट नजिकै अनि हिमालको काखमा प्रस्ताव गरिएको टेक्निकल सेन्टर निर्माण भएमा पोखरा, गण्डकी मात्र होइन नेपालकै लागि गौरव गर्न लायक हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । उनले भने, ‘यो सेन्टरले पोखरा र माछापुच्छ्रेलाई विश्वसामु चिनाउने छ ।’ मर्दी र इदी खोलाको बीचमा रहेको खुला ठाउँमा सेन्टर प्रस्ताव गरिएको प्रदेशको क्षमता अनुसार तटबन्धका लागि सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
एन्फका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोकुल थापाले ३ सय ४२ रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भोगचलन गर्नेगरी सम्झौता भइसकेकोको बताए । डिपिआर तयार भइसकेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकेर मन्त्रालयमा बुझाइसकेको भन्दै अब छिटै शिलान्यास गरिने जानकारी गराए । उनका अनुसार अभ्यासका लागि ४ खेल मैदानसहित होस्टेल, जिम हल, गेस्ट रुम, स्विमिङ पुल, पुस्तकालय रहने गरी संरचना बनाउने प्रस्ताव पारित भएको छ ।
एन्फा कास्की अध्यक्ष मिलन गुरुङले यो परियोजनालाई कमजोर बनाउन चारैतिरबाट आक्रमण भइरहे पनि आफूहरु निरन्तर लागिरहेकाले यो अवस्थामा आइपुगेको भनाइ राखे । स्थलगत अनुगमनमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्ले, मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोला, प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्य, प्रदेश खेलकुद पषिदका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि सहभागी थिए ।